Playstation App – REDPlayer
PS4player ဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲမှာ PlayStation app ကိုထည့်ထားဖြစ်ပါလ်ိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ သင်က PS4 player စစ်စစ် မဟုတ်တဲ့ အပြင် online သူငယ်ချင်းမရှိတဲ့ ဥတစ်လုံးကောင် တစ်ကောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တချိူ့ဂိမ်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေဆော့နေတာဘယ်လို့အဆင့်ရောက်နေပြီ၊ကိုယ်ဆော့နေတာ တိုးတက်မှုရှိလားစတာတွေကိုသိရဖို့ PlayStation app ကိုထည့်ထားရမှာပါ။
PlayStation app ကိုသုံးရလွယ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုနီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Update လုပ်ထားတဲ့ App ထဲကိုစဝင်လိုက်ရင် screen အောက်ခြေမှာ tabs အသစ်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ tab တွေ ဟာ What’s New, Friends နဲ့ Profile တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီtab တွေဟာတစ်ခုကနေတစ်ခုကို ပြောင်းရတာလွယ်ပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ app ကို PlayStation Store ကနေကိုယ့်ဖုန်းထဲကို ယူထားသင့်ပါတယ်။
voucher code redemption ကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့။ နောက်ထွက်လာမယ့်PlayStation4ဂိမ်းအသစ်တွေရဲ့စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရတာလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Android ဆိုရင်တော့ update လုပ်ထားတာက app update ကိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ တစ်ခုသတိထားမိတာက local မှာ console player မရှိတာလား ဒါမှမဟုတ်နည်းနေတာလား? ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့လို့ console သမားတွေက၊ too mature to comment on fb ဖြစ်နေတာလား၊ activity မတွေ့လို့ပါ။ ဘယ်မှ မရောက်တဲ့ group တွေကတော့ အများကြီးပဲလေ။
PS4player ဆိုရငျတော့ ဖုနျးထဲမှာ PlayStation app ကိုထညျ့ထားဖွဈပါလိမျ့မယျ။ မဟုတျရငျတော့ သငျက PS4 player စဈစဈ မဟုတျတဲ့ အပွငျ online သူငယျခငျြးမရှိတဲ့ ဥတဈလုံးကောငျ တဈကောငျဖွဈပါလိမျ့မယျ။ တခြိူ့ဂိမျးတှနေဲ့ပကျသကျပွီး သူငယျခငျြးတှဆေော့နတောဘယျလို့အဆငျ့ရောကျနပွေီ၊ကိုယျဆော့နတော တိုးတကျမှုရှိလားစတာတှကေိုသိရဖို့ PlayStation app ကိုထညျ့ထားရမှာပါ။
PlayStation app ကိုသုံးရလှယျအောငျပွနျလုပျပေးထားတယျလို့ဆိုနီကသတငျးထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ Update လုပျထားတဲ့ App ထဲကိုစဝငျလိုကျရငျ screen အောကျခွမှော tabs အသဈတှကေိုတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီ tab တှေ ဟာ What’s New, Friends နဲ့ Profile တှတှေပေ့ါလိမျ့မယျ။အဲ့ဒီtab တှဟောတဈခုကနတေဈခုကို ပွောငျးရတာလှယျပါတယျ။ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှရေဲ့လုပျဆောငျခကျြတှကေိုလညျးမွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီ app ကို PlayStation Store ကနကေိုယျ့ဖုနျးထဲကို ယူထားသငျ့ပါတယျ။
voucher code redemption ကိုလညျးလှယျလှယျလေးလုပျလို့ရအောငျပေါ့။ နောကျထှကျလာမယျ့PlayStation4ဂိမျးအသဈတှရေဲ့စာရငျးကိုလညျး ကွညျ့ရတာလှယျအောငျလုပျပေးထားပါတယျ။
Android ဆိုရငျတော့ update လုပျထားတာက app update ကိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ဒါနဲ့ တဈခုသတိထားမိတာက local မှာ console player မရှိတာလား ဒါမှမဟုတျနညျးနတောလား? ဒါမှမဟုတျ ကြှနျတော့လို့ console သမားတှကေ၊ too mature to comment on fb ဖွဈနတောလား၊ activity မတှလေို့ပါ။ ဘယျမှ မရောကျတဲ့ group တှကေတော့ အမြားကွီးပဲလေ။
Tags console ps4